How to control the bandwidth about Dlink Wireless router — MYSTERY ZILLION
How to control the bandwidth about Dlink Wireless router
August 2011 edited August 2011 in Internet Security
ရုံးမှာ ADSL လိုင်းကို D-Link Wireless Router ခံပြီးတော့ Wifi ပြန်ခွဲပေးပါတယ် .. အဲဒီ wifi access ကို control လုပ်ချင်လို့ပါ .. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိလို့ .. wifi connection ကိုအချိန်နဲ့ပေးသုံးမယ် .. မသုံးစေချင်တဲ့ဆိုဒ်တွေကိုပိတ်မယ် .. အဲလိုလုပ်ချင်တာပါ .. ဘယ်လိုဆော့ဝ်တွေသုံးလေးရမလဲဆိုတာ mz ကလမ်းညွှန်းပေးကြပါအုန်း
ccproxyကိုတော့သုံးဖူးတယ် ... နက်ဝက်ခ်ကဒ် နှစ်ခုတပ်ပြီးတော့ wireless ကို ထိန်းလို့ ရမရကတော့ မစမ်းဘူးသေးဘူး ... ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးဗျာ ...
cc proxy သုံး​ဘူး​တယ်​ဆို​ရင် အသုံးပြု​နည်း​ကို သေချာ လေ့​လာ လိုက်​ပါ။ ထိန်း​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ wire or wireless ဆို​တာ​က ဆက်​သွယ်​မှု​ပါ။ network card က ထွက်​လာ​တဲ့​ကြိုး​ကို router ရဲ့ wanပေါက်​မှာ
ထိုး​ပြီး​ရင် အရင်​လို​ပဲ wireless သုံး​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ ထိန်း​တာ​ကတော့ ဆော့​ဝဲ​ထဲ​မှာ လုပ်​ပေါ့။
ကျေးဇူးပါ ကိုမင်းချစ်ရေ .. ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုန်းမယ်..
အခုကျွန်တော် သုံးနေတာက TP Link ကိုသုံးနေပါတယ်။ Model TL-WR841N ပါ အဲဒီ router မှာတော့ bandwidth control လုပ်လို့ရပါတယ်. သူ့အရင် router တွေမှာမပါဘူးဗျ... လုပ်ရတာလည်းလွယ်တယ်လေ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးဖွင့်ပြီး မီးပျက်မီးလားအဆင်မပြေဘူးဗျ ကျွန်တော်ကတော့ router ကိုပိုသဘောကျတယ် Dlink တော့ ကျွန်တော်လည်းမသုံးဘူးဘူး linksys တွေထဲမှာလည်း ပါတာမတွေ့ဘူး Advance linksys router တွေတော့ ပါချင်ပါမယ်လေ.
ဈေးသက်သာသာနဲ့ တော့ TP link ပဲသုံးပါ. ကျွန်တော် ၃လုံး download ပြိုင်ဆွဲတာ အဆင်ပြေတယ်... အေးဆေးပဲ speed ကျမသွားဘူး မူလလိုင်းက တက်လိုက်ကျလိုက်ဆိုရင်တာ့ အဆင်မပြေတာပဲရှိတယ် ကျွန်တော်က ညဘက်စမ်းတာ လိုင်းငြိမ်တုန်းစမ်းတာ အဆင်ပြေပါတယ် ... setup လုပ်ရင်တော့ bandwidth ကိုတွက်ချက်ပေးလိုက်... သူက kilo bits per second နဲ့ပြတာ ပုံမှန် kilo bytes per second ကို ပြန်တွက်ပြီးထည့်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါမယ်...
အဲဒီအကြောင်း သိချင်နေတာ။ ကျေးဇူးပဲ အစ်ကိုရာ။ ကျွန်တော်ကလည်း Bandwidth control လုပ်ချင်တာ ဆော့ဝဲလဲ မသုံးချင်ဘူး ။ အစ်ကိုပြောသလို ကွန်ပြူတာ တစ်လုံး အချိန်ပြည့် ဖွင့် ထားဖို့ဆိုတာ အဆင်မပြေလှဘူး။ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ TL -WR542 G မှာတော့ IP Qas ဆိုတာပါလို့ control လုပ်ကြည့် တာ သိပ်မထူးသလိုပဲ။ ဉပမာ ကျွန်တော့် IP ကို 20 kbps ပဲထားပြီးတော့ ဒေါင်းလော့ စပိစမ်းကြည့်တာ 200 kbps လောက်တက်နေတယ်။ အဲဒါမလုပ်ပဲ ရိုးရိုးစမ်းရင် 400 kbps
လောက်ရှိတယ်။ အစ်ကိုပြောတဲ့ TL-WR 841 N မှာဆိုရင် အတိအကျရမလား? ကျွန်တော်ပဲ ဆက်တင်ချတာ မဟုတ်လို့လား။ စက်တစ်လုံးကို ဘယ်လောက် kbps ပေးသင့်လဲ။ အစ်ကို ဆက်တင်လုပ်တဲ့ပုံစံကို နမူနာလေး ပြောပြပေးပါလား ခင်ဗျာ။ စောင့် နေမယ်နော် အစ်ကို။